iPhone Call History Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado Call Log on iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Sidee inuu ka soo kabsado Call History on iPhone (iPhone 6s Plus / 6s mid)
Sidee ayaan u soo kaban karaa log wac iPhone?
By qalad ayaan tirtirayaa dhowr ah oo aan u baahanahay in si deg deg ah ay leeyihiin oo mana aan dib up, fursad kasta oo soo celin kara log yeedho on my iPhone (macruufka 9)?
Ha aad ka walwalsan tahay markii waxaas uu aqrinayo. Waxaa jira saddex hab oo aad u isticmaali karto inuu ka soo kabsado taariikhda wac iPhone: si toos ah uga gurmad Lugood baarista iPhone, soosaaray oo ka soo kabsado gurmad iCloud. Saddexdan siyaabo ha idin ​​soo kabsado calls seegay, wacay iyo taleefan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in la helo qalab kabashada taariikhda iPhone call ah kuwaas oo kaa caawin karaan inaad hesho yeedho gasho baxay. Wondeshare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa qalab noocan oo kale ah.
3 siyaabood oo aad ku soo kabsado log wac tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Kabsado tirtiray log wac iPhone oo ay ku jiraan wacay, xilka iyo ka maqan.
Ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud soo ceshano taariikhda wac iPhone si toos ah.
Faahfaahinta kulanka xiisaha leh sida lambarada telefoonka, magacyada, taariikhaha wac, muddada, iwm
Dhaawac xogta No, beddelid, dillaac oo khatar la'aan.
1: ka iPhone Ladnaansho Call Log
2: ka Lugood Ladnaansho Call Log
3: ka iCloud Ladnaansho Call Log
Qaybta 1aad: Si toos ah Ladnaansho Call History ka iPhone (macruufka 9)
Tallaabada 1 Connect aad iPhone oo iskaan
Sidaas, waxaad u baahan tahay in aad iPhone dhow dahay oo aad u xiran computer markii hore. Markaas ordi barnaamijka iyo sii joogo hab kabashada ee "soo kabsado macruufka Qalabka" ka. Marka aad aragto suuqa kala muujiyey dhanka midig, oo aad si toos ah u riixi kartaa "Start Scan" badhanka si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone taariikh wac lumay.
Fiiro gaar ah: Haddii aad iPhone 4, iPhone 3GS ama iPhone 3G xirmaan, waxa kale oo aad heli kartaa la gelin doono "Advanced Mode" si aad u hesho baaritaan qoto dheer. Markaas barnaamijka aad u horseedi doonaa in baarista iPhone.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray taariikhda call ka iPhone
Marka barnaamijka ka baxayo aad ka baareyso iPhone, waxaa aad u soo bandhigaan doonaa natiijo baaritaan muujinaya dhammaan xogta recoverable aad iPhone, soo wac oo keliya ma aha abuse, laakiin sidoo kale xiriiro, fariimaha, sawiro, videos, iyo wixii la mid ah. Laakiin waxaad fursad u haysataa in ay ku eegaan iyo go'aan waxyaabaha aad rabto in aad soo kabsado. Markaasuu iyaga sax iyo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u dhan badbaadin on your computer ka mid ah.
Qeybta 2: ka gurmad Lugood Ladnaansho iPhone Call Taariikhda
All ama waxba, taasi waxa weeye waxa gurmad Lugood ogolaano sameeyo. Waxa kaliya ee aad leedahay fursad ay ku soo celiyo wax walba oo gurmad Lugood ee file aad iPhone, ama wax aad soo celiyo. Ma jiro eegista dib u soo celinta. Maxaa dhacaya haddii aan rabno in aan soo celiyo qaar ka mid ah eegista xogta gaarka ah ka gurmad ah? Habka hoos ku qoran waxa ay noqon doontaa quruxsan waxtar leh.
Tallaabada 1 Dooro iyo Macdan Lugood gurmad file
Ma u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer marka aad doorato sidan, oo ha sameeyo, waayo, gurmad Lugood si fudud updated kartaa haddii aad karti .Wadashaqayntaas ah automatic.
Oo Bilaabay Si fudud barnaamijka on your computer iyo dooran hab ah "kabsado Lugood ee kaabta faylasha". Markaasay aad arki doonaa in dhammaan faylasha gurmad ee ay Lugood on your computer waxaa lagu soo bandhigay liis ay barnaamijka si toos ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ay doortaan mid ka mid ah si aad u iPhone ama mid aad rabto in aad soo saaro, oo guji "Start Scan" badhanka si ay u helaan waxa ay soo bixiyay.
Tallaabada 2 call log Kulanka Xiisaha Leh ceshan iPhone kaga imaanayo Lugood
Barnaamijku wuxuu ka heli karaa gurmad soo saaro dhowr ilbiriqsi. Marka lagu sameeyey, aad ku eegaan karo ku jira oo dhan in gurmad ah in faahfaahin. Ka dooro "Call History" menu dhanka bidix. Waxaad ka akhrisan kartaa telefoonka mid taariikhda wac mid ka mid. Sax shayga aad rabto inaad xajisaan oo u badbaadin doonaa si aad u computer adigoo gujinaya batoonka "Ladnaansho".
Qeybta 3: ka gurmad iCloud Soo Celinta iPhone Call Taariikhda
Just la mid ah sida Lugood, iCloud sidoo kale ma ogola in aad ku eegaan ama xushay soo celin xog gaar ah ka ay gurmad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa la isticmaalayo qalab dhinac saddexaad oo kaa caawin kara in aad soo saaro gurmad ah u soo kabashada xushay oo soo celiyo. Waxaa sidoo kale jira hab noocan oo kale ah.
Tallaabada 1 Orod barnaamijka iyo saxiixa in aad iCloud
Dooro inaad isticmaasho sidan, waxaad u baahan tahay in aad ogaato in aad xisaabta iCloud, taasi waa in la yidhaahdo ID Apple iyo sirta ah, si aad hoos ka heli kartaa oo gurmad online iCloud.
Ka dib markii socda barnaamijka, bedesho hab ah "kabsado iCloud ee kaabta faylasha". Markaas waxaad si toos ah u saxiixi kartaa in aad xisaabta iCloud adigoo ku ID Apple iyo sirta ah. Waxaa gebi ahaanba ammaan halkan. Wondershare Haysan maayo ama soo daato wax macluumaad ah oo ku saabsan xisaabta iyo xogta.
Tallaabada 2 Download iyo iskaan gurmad iCloud ah
Marka aad heysato in, barnaamijka lagu ogaan karaa dhammaan faylasha gurmad jira in aad xisaabta iCloud. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah si aad u iPhone oo guji "Download" badhanka si aad u hesho hoos si aad u computer. Hannaanka dajinta ayaa aad qaadan doonaa xoogaa daqiiqo ah. Soo qaado koob bun ah oo ay sugaan in mudo ah.
Fiiro gaar ah: file ayaa lagala soo bixi waxa uu ku yaalaa kaliya on your computer. Waxaa jira diiwaan gelin barnaamijka ama meel kasta oo kale.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan wac log aad iPhone
Ka dib dajinta, waxaa jiri doona badhan scan muuqday. Waxaa Riix u dhaqaaqo. Marka scan ay ka badan tahay, oo aad ku eegaan karo waxa ku jira faylka gurmad si faahfaahsan. Ka dooro "Call History", oo aad mid mid ka akhrisan kartaa alaabta oo dhan. Sax shayga aad rabto in aad soo kabsado iyo badbaadin on your computer.
3 Hababka si ay u gudbiyaan Songs ka CD si iPhone
Sida loo soo dejinta Photos ka iPhoto si iPhone
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Call History on iPhone